RS သက်တန်းဆယ်နှစ်ကျော် သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ နေတိုး နဲ့ ချစ်သူမီးငယ်လေး အကြောင်းဖော်လိုက်တဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး – Shwe Ba
RS သက်တန်းဆယ်နှစ်ကျော် သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ နေတိုး နဲ့ ချစ်သူမီးငယ်လေး အကြောင်းဖော်လိုက်တဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး
နေတိုး ဆိုတာတနိုင်ငံလုံး သိပေမယ့် နေတိုးရဲ့ အချစ်ရေး ကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြသေးဘူးကျုပ်ပဲသိတယ်ဗိုက်ထဲမှာ ပုဏ္ဏားလေး ရှိနေလို့အမှန်တော့ နေတိုး နဲ့သူ့ ချစ်သူ
ကောင်မလေး မီးငယ်တို့တွဲနေတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီဒီကြားထဲမှာ နေတိုးနဲ့ တခါ ပြတ်သွားသေးတယ်မီးငယ်နဲ့ပြတ်ပြီးချိန်မှာနေတိုးကလည်း တခြား ကောင်မလေးတယောက်နဲ့တွဲလိုက်သေးတယ်အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ ပြတ်သွား ပြန်တော့သူ့ရဲ့အချစ်ဦး မီးငယ်နဲ့ ပြန်တွဲတာနေတိုးက
မီးငယ်ကို ဘာလို့ ချစ်လည်းဆိုရင်သူ့အပေါ်နားလည်မှု ရှိတာရယ် မီးငယ်က အပြင်မှာ ပိုလှပီးပိုချစ်စရာ ကောင်းနေတာလည်း ပါတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေတိုးကို ချစ်သလိုနေတိုးချစ်တဲ့ ကောင်မလေး ကိုလည်း ချစ်ပေးရမှာ ပေါ့လေပရိတ်သတ်ကြီးရော သဘောတူတယ်မလား..?
နတေိုး ဆိုတာတနိုငျငံလုံး သိပမေယျ့ နတေိုးရဲ့ အခဈြရေး ကိုတော့ဘယျသူမှမသိကွသေးဘူးကြုပျပဲသိတယျဗိုကျထဲမှာ ပုဏ်ဏားလေး ရှိနလေို့အမှနျတော့ နတေိုး နဲ့သူ့ ခဈြသူ
ကောငျမလေး မီးငယျတို့တှဲနတော ဆယျနှဈကြျောပွီဒီကွားထဲမှာ နတေိုးနဲ့ တခါ ပွတျသှားသေးတယျမီးငယျနဲ့ပွတျပွီးခြိနျမှာနတေိုးကလညျး တခွား ကောငျမလေးတယောကျနဲ့တှဲလိုကျသေးတယျအဲဒီကောငျမလေးနဲ့ ပွတျသှား ပွနျတော့သူ့ရဲ့အခဈြဦး မီးငယျနဲ့ ပွနျတှဲတာနတေိုးက
မီးငယျကို ဘာလို့ ခဈြလညျးဆိုရငျသူ့အပျေါနားလညျမှု ရှိတာရယျ မီးငယျက အပွငျမှာ ပိုလှပီးပိုခဈြစရာ ကောငျးနတောလညျး ပါတာပေါ့ဘာပဲဖွဈဖွဈ နတေိုးကို ခဈြသလိုနတေိုးခဈြတဲ့ ကောငျမလေး ကိုလညျး ခဈြပေးရမှာ ပေါ့လပေရိတျသတျကွီးရော သဘောတူတယျမလား..?
သူမကို ဝေဖန် ပြောဆို နေတာနဲ့ ပက်သက် ပြီး တုံ့ပြန်ပြော လိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး